Katroka 7 Miliara · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Katroka 7 Miliara
Pakistana: Miaraka Amin'ny Gawaahi Mandrava Ny Fady
Efa hatry ny ela ireo teknolojia fampahalalam-baovao sy fifaneraserana (TIC) no hita toy ny fanambaràna fiovàna erantany. Anisan'ireo tetikasa mikendry ny hanasongadina ny feo tena tsy heno loatra ao anatin'ny fiarahamonina pakistaney ny Gawaahi (ao amin'ny Facebook ihany koa). Mampiaraka ny TIC sy ny fikatrohana ara-tsosialy.
Ejypta: Ny Karapanondronao, Ny Zonao Ry Vehivavy
Araka ny tarehimarika avy any amin'ny Ministeran'ny Atitany Ejypsianina, mahatratra 4 tapitrisa ireo vehivavy eto amin'ny firenena no tsy manana kara-panondro. Ny vehivavy tsy manana kara-panondro dia tsy manan-jo hanan-tany, tsy afaka mividy na mivarotra tapakilan-drenivola ary tsy afaka mandova raha misy ny fahafatesana eo amin'ny fianakaviana. Mandrara ny vehivavy tsy hiditra amina karazana raharaham-panjakana ihany...
Azia Atsimo15 Oktobra 2017
Azia Atsimo31 Mey 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana04 Avrily 2012
Tantara mikasika ny Katroka 7 Miliara
Kioba: Mpiaro Ny Habaka Maitso Eny An-tanàn-dehibe
Amerika Latina 08 Novambra 2011
Tamin'ny Desambra 2006 dia notapahana ny hazo be iray efa anjato taonany antsoina hoe Ceiba, na Kapoaka, tao San Agustín mpifanolo-bodirindrina amin'ny Havana, renivohitra Kiobana. Ity tranga nampalahelo ity dia nanosika ireo tanora Kiobana hanangana ny El Guardabosques (Ny Mpiambina ny Ala na Forest Ranger).
Timor Atsinanana: Fidirana An-tsehatra Amin'ny Famoronana Sy Ny Kolontsaina
Azia Atsinanana 07 Novambra 2011
Ilay mpanakanto David Palazón ao Barselona dia namarana ny asany amin'ny maha mpanakanto azy tao Timor Atsinanana, kanefa toy ny karazana fiatoana ihany izany. Ankehitriny izy dia mandray anjara amin'ny tetikasam-pikarohana momba ny kolontsaina timaore, ary manantena ny hanokatra sekoly manokana ho an'ny orinasam-pamoronana, mba hanetsehana ny lafiny arak'asa momba ny toekarena tsy miankina amin'ny solitany; ny orinasa madinika sy ny fizahantany.
Mozambika: Fampivondronana Ireo Tantsaha Madinika Mba Hanànana Ho Avy Mamirapiratra
Afrika Mainty 26 Oktobra 2011
Atoa Júlio dos Santos Pêssego no anisan'ireo mpitarika voalohany ny "hetsiky ny tantsaha" ao amin'ny faritanin'i Niassa ao Mozambika. Manampy amin'ny fananganana vondrona eo amin'ny fiarahamonina ka miasa mba hiarovana ny zo amin'ny fananan-tany, hampitomboana ny famokarana sakafo ary hiainan'ny fianakavian'ny tantsaha ao anatin'ny fahampiana.
Afrika Mainty 19 Oktobra 2011
Efa mahatratra 7 lavitrisa ny isan'ny mponina manerantany amin'ny faran'ity volana oktobra ity, ary hita taratra ao Lilongwe, renivohitr'i Malawi ihany koa ny fitomboan'isa vetivety raha jerena ny habetsahan'ny olona tafangona eny an-tsena. Anankiroa amin'ireo tsena ireo no eny andaniny sy ankilan'ny reniranon'i Lilongwe, izay tanana zara raha mihoatra ny...
Amerika Latina 19 Oktobra 2011
Fony izy mbola nanefa sazy tany amponja, i Ronaldo Monteiro dia nanomboka tetikasa iray niaraka tamin'ireo mpiara-mifonja taminy ary nanova ny fiainany. Taona maro taty aoriana dia nomena fahafahana narahana fepetra izy ary mitantana ONG iray izay manome vintana ho afaka miverina eny anivon'ny fiarahamonina an'ireo tanora nandika lalàna, ireo mbola mifonja ary ireo avy nifonja